गर्मीका रोमाञ्चक कथा
गर्मीको महिना आउँदा दाङमा बाल्यकालमा बिताएका दिनहरू सम्झनामा छन् । भित्री मधेस भएकाले नेपालगन्ज र बुटौलभन्दा दाङ अल्लि शीतलो ठाउँ त हो नै , तैपनि वैशाख(जेठको रापतापले हामीलाई नडाम्ने कुरै थिएन । आजभोलि पङ्खाको व्यवस्था हुँदाहुँदै मान्छेहरू दाङमा बस्नै नसकिने गर्मी बढ्यो भन्न थालेका छन् भने त्यो बेला त यस्ता …
स्वादिलाे नारामा सीमित दिवस
हाम्राे सानाे देशमा असङ्ख्य सांसद छन् । थाेरै अाय भएका जनताले भसक्कै करकाे भारी तिर्छन् । देशमा कलकारखाना खुलेकै छैनन् । मजदुर दिवस भव्यताका साथ मनाइन्छ । कताकता भाङ्राेकाे गादाेमा गुहेँलाकाे फुल सिउरेजस्ताे लाग्छ । नारा पनि कति मिठाे छ ,”विश्वका मजदुर एक हाैँ “। नेता गुटमा विभक्त छन् , …
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको वाधक: भ्रष्टाचार
विजय जि.एम. सरकारले घोषणा गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सफल गर्नको लागि मुख्य आधार नै सुशासन हो । सुशासनबिना न देश समृद्ध हुन्छ न जनता सुखी हुन्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकांकमा नेपालको स्थान १२४ औं देखाएको छ । यो …
सुमन पोख्रेल अाेहाे ! हाेलीकाे दिन अाउँदा उही सिँगाने बेलाकाे झझल्कोले सताउँछ । व्याकरणका अाँखामा “हाेली ” शब्द शुद्ध हाे तर हामीले यसलाई ” हाेरी” नामले पुकार्थ्याैँ । जसरी अहिलेका बच्चाहरू हप्ता दिनअघि नै हाेलीकाे लागि सरजामकाे प्रबन्धमा लाग्छन्, त्यसरी हाम्रो तयारी हुँदैनथ्याे । हाेली किन खेलिन्छ भन्ने रहस्य पनि …
स्वाङ कि सहानुभूति ?
सुमन पोख्रेल अाज मलाई अल्लि बाङ्गाेबाङ्गाे कुरा लेख्न मन लागेकाे छ । मलाई लाग्छ याे लेखाइले म धेरैकाे टाेकाइमा पर्नेछु ।” मुण्डमुण्ड बुद्धि कुण्डकुण्ड पानी” भन्छन् । यहाँ अनेक थरी मगज र तिनकाे अाफ्नै संरचना भएकाले तिनीहरूकाे हमलाबाट म बच्ने छैन । त्यसै पनि हामी नेपालीकाे संश्लेषण भन्दा ज्यादा विश्लेषणमा …
समयले पुरेका परम्परा
सुमन पोख्रेल हेर्दाहेर्दै कति कुरा विस्थापित भइसके र कति कुरा स्थापित भइसके । बारीका ढिकढाकमा रहरे भात खाने प्रचलन हटेर नयाँ स्वरूपमा पार्क वा वनतिर पिकनिक खाने चलन आइसक्यो । गर्मीको याममा खाना खाइसकेपछि गाउँघरमा रातभरि मादलको तालमा नाचगान र सुखदुःखका भलाकुसारी गर्ने परम्परालाई रेस्टुरेन्टको लोकदोहोरी साँझले नउस्किने …
« अघिल्लो पृष्ठ 1 … 12 13 14